10:42 PM ညီနေမင်း No comments
Group (3) PC Service Ebooks Collection (143 MB)
Group (2) Window O/S Ebooks Collection (125 MB)
Group (1) O/S & Computer collection (Myanmar Ebooks) (26 MB)
Posted: 13 Jul 2013 05:22 PM PDT
ဒါကို Group (3) လို့ နာမည်ပေးထားပါတယ်။ PC Service နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ စာအုပ်တွေ စုစည်းထားတာပါ။ ဆိုက်ကတော့ 143 MB ရှိတယ်။ ခွဲတင်ပေးရင် ရှုပ်နေမှာစိုးလို့ တစ်ခါတည်း ပေါင်းတင်ပေး လိုက်တယ်။ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ နည်းနည်းလောက် သီးခံပြီးတော့ ဒေါင်းစေချင်ပါတယ်။ IDM နဲ့ သာ Download လုပ်ပါ။
Computer Hardware Maintenance(U Zaw Lin)
PC Mechanic By Zaw Linn
Professional Solution Guide
Teach Your The Best Technology and Repairing PCs
Understanding PC Harware
Posted: 13 Jul 2013 04:07 PM PDT
ဒါကတော့ Window O/S နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်ချည်းပဲ စုထားတဲ့ အုပ်စုပါ။ Group (2) လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။ စာအုပ်နာမည်တွေ ကတော့ အောက်မှာ အစဉ်အလိုက် ရေးပြထားပါတယ်။ ဒီ Group ကတော့ 125 MB ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် sorry ပါ. တင်ပြီးမှ သတိထား မိလိုက်တာ။ ဒါပေမယ့် တ၀က်လောက် ရောက်နေပြီဆိုတော့ မထူးတော့ဘူး ဆိုပြီးတော့ တင်လိုက်တာ။ အရမ်းတော့ ဆိုက်မကြီးဘူး ထင်တာပါပဲ။ အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ Link သေနေရင် နောက်ပိုင်းပြောလို့ ရအောင်လို့ ကျနော် facebook နဲ့ ချိတ်ပေးထားပါ့မယ်။ သေတဲ့ ပို့စ်ဆိုရင် ဖျက်ပစ်ပြီး version အသစ်တင်ရင်း အစားထိုးထည့်သွားပေး ပါ့မယ်။
Basic Windows and Microsoft Word
Guide to Windows Server 2008
how to install myanmar font
Windows7by U Aung Lin
Windows7Part 1
ဒါကတော့ အဓိကကတော့ Operating system နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်တွေကို စုစည်းပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း (၁၀) အုပ်ရှိ ပါတယ်။ ဘာတွေပါလဲဆိုတာကတော့ အောက်မှာ စာအုပ် နာမည်တွေ အစဉ်လိုက် ရေးပြထားပါတယ်။ တစ်အုပ်ချင်းစီကိုတော့ ကျနော့် အတွက် တော်တော်လေး တင်ရတာ လက်ဝင်လို့ စုစည်းပြီးပဲ တင်ပေး လိုက်ရတာကို နားလည်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ တချို့ကလည်း အခုလို စုစည်းပြီးလိုချင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အဆင်ပြေ မယ်လို့ မျှော် လင့်ပါတယ်.
Computer shorts and special characters
Linus OS Myanmar Version
Zippyshare | Solidfiles | Filecloud | Ziddu | Tusfile | Sharebeast | Mirrorcreator